1766-L32BWA CPU - Izindaba - Izimboni Zokungenisa Izimboni ZeHuiTong kanye Nezitolo Zangaphandle google-site-verification=TXg1_WchYlMLB36tKPCkhY02HfKkkQfiMDCP-ksCfHM
Isilawuli seMicrosoftLogix 1400 sithuthukisa uhlelo olusha lwe-RSLogix 500 isofthiwe yohlelo lokuqala, kanti iMicroLogix kanye nemindeni ye-SLC 500 yamukela imiyalo yohlelo oluhlangene. I-RSLogix500Starter (i-basic basic), i-standard (standard standard) ne-Professional (edition professional) kanye ne-RSLogix Micro software yonke isekela isilawuli se-MicroLogix1400, kufaka phakathi umsebenzi wokuhlela ku-inthanethi.
I-percontroller inamachweba ama-2 we-serial, ukusekela i-DF1 / DH485 / Modbus RTU / DNP3 / ASCIIprotocol, itheku elakhiwe nge-ethernet, kusekela i-EtherNet / IP pext information information.
Izinzuzo ze-MicroLogix 1400 isilawuli
Isikhala esikhulu sokulondolozwa (Izinhlelo zomsebenzisi eziyi-10 KB nemininingwane yomsebenzisi eyi-10) zingahlangabezana nezidingo zezicelo eziningi.
0Real online ukuhlela okushintsha izinhlelo online, kufaka ne-PID, ngaphandle kokungaxhunyiwe ku-inthanethi.
I-0RSLogix Micro ne-RSLogix 50RSLogix Micro0RSLogix Micro Professional (I-Professional Edition), Okujwayelekile (Okujwayelekile Edition)
Izinguqulo ze-0Starter (Basic Edition) Software 8.1 andlater zisekela ukuhlelwa kwe-inthanethi kwe-MicroLogix 140Starter (0Starter (abalawuli.
0Switch phakathi kokugijimisa / ukude / izindlela zokuhlela ngekhibhodi ye-LCD.
0 Umsebenzi wokuqoshwa kwedatha ngokusekelwe ngesikhathi se-orevent, isikhathi sesikhathi sokuzikhethela. imininingwane yokulawula igcinwa endaweni ehlukile ye-128 Kstorage yokuhlaziya (isb. umkhuba kanye nedatha ye-I / O nge-alamu).
Isitolo sokumiswa kwe-A0 (kufika ku-64 KB yesikhala sokugcina esikuyo indawo yokufaka idatha) singafinyeleleka ngomdwebo weleli, ongashintsha i-thetimer, i-counter, kanye nezinye izinhlobo zedatha yohlelo ngokushesha okukhulu futhi kalula.
0High performance I / O ongakhetha ukwengeza, (kufika kumamojula angu-16 / I / O angakwazi ukunqumela ngokulengayo).
Okokufaka okuhamba ngesivinini esiphezulu (ngaphandle kwe-1766- L32AWA ne-1766- L32AWAA) kungasetjenziswa ngokuhlukile njenge-othomathikhi yokuvala into (ukufakwa kokuthwebula) ukufakwa, ukuphazamiseka kwesikhathi noma inhlanganisela njengokubala okuphezulu kwe-100 Hz ezindleleni eziyi-10 zokusebenza.
Ukufakwa kwe-anobuji kwe-Twobuilt-in 0-10 V DC (kubalawuli ngezinketho ze-analog I / O) ngesisombululo se -12-bit (okungasodwa).
Imiphumela yokuphuma kwesivinini emithathu ingamiswa njengo-100 kHz wokudonsa ngokulandelana kokukhipha (PTO) oras 40 kHz.
ukuphuma kwe-pulse wide modulation (PWM) (directorynumbers 1766- L32BXB and 1766- L32BXBA kuphela).
Okokufaka okubandakanya amaphuzu amaningi nokukhishwa kokuphela, okuvumela ukugcwaliswa futhi kuphume imodi yokufaka, kuyilapho kunikeza ukuphela okujwayelekile okujwayelekile kwamadivayisi wokufaka amazinga amaningi.
0Ekunye ukuphazamiseka kwesikhashana kokukhetha isikhathi (STI).
Isikhathi sokuxazulula esingu-0High, ukunemba okungu-1 ms.
Isiteshi sokuxhumana 0 sihlinzeka ngogesi ka-RS-232 noma we-RS-485 (kukhethwe nge-mawasilianocable).
I-0RS-232 imbobo isekela onke ama-serial portprotocols.
Ngesango le-RS-485, ungangena ngqo kwi-DH-485ā €I-DF1 semi-duplex master / isigqila, i-ASCII.
Amanethiwekhi we-0Modbus RTU / amakhoboka. ineaccess DNP yenethiwekhi yezigqila isebenzisa isibonisi sokuguqula esingu-1763- NC (akukho ukuguqulwa kwesi-1761-NET-AIC) kuyadingeka.
Isiteshi sokuxhumana esingu-1 siqukethe imbobo ye-RJ45 eyakhelwe ngaphakathi esekela amanethiwekhi we-EtherNet / IP ukudlulisa imininingwane yontanga-kuya-kontanga. I-10/11 Mbpsports isekela i-BOOTP ne-DHCP ..
IChannel Yezokuxhumana 2 ichweba eliyi-9-pine, elingashayi eceleni le-RS-232 elisekela wonke ama-serial mediaprotocols.
Inkinobho yokushintshwa kwezokuxhumana i -0 ivumela imbobo yesiteshi 0 yomlawuli ukuthi ishintshe izinkundla zokuxhumana ezilungiselelwe abasebenzisi nezilungiselelo ezizenzakalelayo zefekthri, ziguquka kalula zivela ku-Modbus RTU noma i-ASCII protocol (akukho luhlelo lokusekelwa) iphrothokholi ephelele ye-DF1 (yokulayisha / ukulanda, ukuqapha noma ama-editingprograms). Ngakho-ke noma ngabe izinhlaka zokuxhumana zesilawuli azixazululwa kahle, ikhompyutha efaka uhlelo isengakwazi ukuxhuma i-thecontroller.
Umehluko phakathi kwe-starter ethambile ne-inverter